२०२५ भित्र नेपाललाई औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने - Gaule News
२०२५ भित्र नेपाललाई औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने
काठमाडौं– विश्व औंलो दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाईदैछ । यसै अवसरमा नेपाल सरकारले बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सन् २०२५ भित्र नेपाललाई औलोमुक्त राष्ट्रको रुपमा पुर्‍याउने संकल्प पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सो प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न सरकारले ‘औंलो उन्मूलन कार्यक्रम’ देशभर संचालन गरेको जनाएको छ । लामखुट्टे भएका घर, गोठमा पुगेर यो रोगको संक्रमण हुन नदिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन भईरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. विवेककुमार लालले जानकारी दिए ।
सरकारले यस वर्ष ‘हाम्रो सक्रियता, औलो निवारणमा सफलता’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । रोग आउनै नदिने गरी लामखुट्टे नियन्त्रणको काममा केन्द्रित अभियान संचालन गरिएको पनि महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. लालले बताए ।
सरकारले यसवर्ष औंलोबाट हुने विरामीको संख्या ९० प्रतिशतले घटाउने रणनीति अनुसार काम भइरहेको दावी गरेको छ ।
नेपालमा हाल वर्षमा १ हजार औंलो रोगी देखिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विश्वमा औंलो रोगबाट करिव ५० हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार औंलो रोगका कारण मृत्यु हुनेहरुमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिका धेरै रहेका छन् ।
हेटौँडामा ५३ करोडको विद्युत चुहावट, कर्मचारीकै मिलेमतो !
अस्त व्यस्त बन्यो लुम्बिनी
दूध बेचेर मासिक एक लाख अाम्दानी गर्छन् नीलकण्ठ
सोलु दुधकुण्ड नगरपालीकाले ल्यायो ५० करोड बढिको बजेट